Izihlobo ze-wTVision ku-Ultimatte Zomsebenzi Ongokoqobo Wamaqiniso Ngezikhathi Zokhetho lwasePanama - I-NAB Khombisa Izindaba ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » Ama-wTVision ahambelana ne-Ultimatte yomsebenzi weqiniso augmented ngesikhathi Sokhetho lwasePanama
Ama-wTVision ahambelana ne-Ultimatte yomsebenzi weqiniso augmented ngesikhathi Sokhetho lwasePanama
I-Fremont, CA - Agasti 13, 2019 - I-Blackmagic Design namuhla umemezele ukuthi i-Ultimatte, iprosesa yayo yesikhathi sangempela, isetshenziswe yi-wTVision yokukhiqizwa okungokoqobo (AR) kanye nokuqanjwa kwemidwebo ephelele ngesikhathi sokusakazwa kwama-primaries ePanama ye-2019, iphalamende nokhetho lukamongameli ku-TVN. I-Blackmagic DesignStudio Studio ka-ATEM HD i-switcher yokukhiqiza bukhoma nokunye okuningi kusetshenziswe futhi ukwenza ukuhamba komsebenzi okuthembekile okugcina izwe laziwe, okukhombisa imiphumela yangempela yesikhathi, ukuqagela kanye nomphumela wokugcina wokhetho ngendlela esebenzisanayo.
I-TVN, inethiwekhi yethelevishini esePanama, ebambisene ne-wTVision, umholi kwimidwebo yesikhathi sangempela, i-AR ne-playout automation, okhethweni ngenxa yesipiliyoni seWTVision ebanzi emkhakheni. Njengoba kunamahhovisi amaningi emhlabeni jikelele, iqembu le-Colombia elakhiwa yi-wTVision lalikhethelwe iphrojekthi futhi lalidingeka ukuhambisa lona I-Blackmagic Design ukuhamba komsebenzi kusuka ehhovisi lakhe eColombia kuya kuma-studio ePanama lapho kwakusakazwa khona ukhetho.
"Ngenxa yokuthi sisebenzisa isitudiyo seTVN, bekumele sisebenze ngamakhamera abo akhona nokukhanyisa," kusho uJorge Kossowski, umphathi weColombia kwiWTVision. "Besingenamandla okuzibusa, ngakho-ke sithole ukhiye we-chroma ka-Ultimatte, osivumele ukuthi silungise noma ngabe yikuphi ukuvela kwemithunzi. Sidubule isethuli phambi kwesikrini esiluhlaza esinamakhamera ahlukile kusethi, ngakho-ke ikhamera ngayinye yathatha isithombe esiluhlaza ngombono ohlukile nangokubukeka okuhlukile. Nge-Ultimatte, sikwazile ukuguqula isimo sangemuva kanye nemibala yangemuva ukwenza ikhwalithi yesithombe ihambisane nokusakazwa. ”
Njengoba amavoti abalwa abazongenela izihlalo ephalamende, iWTVision ibonakalisa ukuthi izophumelela ngesikhathi sangempela ngokwakha “izihlalo ezimhlophe” isithombe esimele izihlalo ezahlukahlukene kusiShayamthetho. Lapho ukunqunywa kwesihlalo ngasinye kunqunywa, isithombe siguqukele kumbala othile ohambisana neqembu eliphumelele.
“Besifuna ukudala okuthile okusha futhi okulula ukuthi ababukeli bakuqonde. Kwesinye isikhathi ukubheka izinombolo kuyamangaza futhi kuyadida, ngakho-ke ngokubonisa imiphumela nezihlalo, sikwazile ukukhombisa okuthile okusebenzisana. Nge-Ultimatte, sikwazile ukuhlanganisa izihlalo kusethi ebonakalayo ngaphandle kokuthi izinto ezihlanganayo zingene futhi zinyamalale noma zidlule, ”kuchaza uKossowski.
Ngokufanayo, okhethweni lukamongameli, i-wTVision idale imephu emhlophe yasePanama, kwathi lapho idolobhana ngalinye lithola amavoti abazongenela ukhetho, isithonjana esisebalazweni elimele idolobha sashintsha sibonisa umbala othize ohambisana neqembu lepolitiki lalowo owinayo.
“Ngenkathi imiphumela ingena, bekufanele siqinisekise ukuthi 'sidweba' idolobha ngombala ofanele. Njengoba isethi bekungamaphesenti angu-50 engokoqobo namaphesenti we-50, sibeka okumaka phansi ukuze umethuli angayekeleli ukubonisa imidwebo yemephu eboniswayo. Ngasohlangothini lwemephu, sasiba nemidwebo eyengeziwe enobuso babaqokeleli nenani lamavoti abawinile. Kwakuyisibopho esikhulu ukuthola leli lungelo, ikakhulukazi uma uphila futhi ungakwazi ukwenza izinguquko kokuthunyelwe. Abakwa-Ultimatte vumela umethuli abeke umthungo ngemuva kwezinto ezisobala futhi azungeze izinto ngaphandle kokukhishwa. ”
Okunye futhi okwakusongela ukusakazwa kwakuyi-ATEM Television Studio HD. I-wTVision isebenzise ukuqapha ama-engeli amakhamera ahlukene futhi iguqule kahle phakathi kokudutshulwa ngaphandle kokulahlekelwa ukushaywa. “Ukhetho lunamandla amakhulu, ngakho-ke ukuhamba kwethu ukusakaza bekufanele kukhombise lokho. I Kulula ukuyisebenzisa, kepha icwecwe i-ATEM Television Studio HD kwaba yilokho kanye esikudinga nokunye. Ngokubuka okuhlanganisiwe okuningi, bekulula ngathi ukubona imidwebo yethu yangokwezifiso, isikrini esiluhlaza, nazo zonke ezinye izinto endaweni eyodwa, ”wengeza uKossowski.
Ukugeleza komsebenzi we-wTVision kwakungamakhadi amane wokuthwebula we-Decklink Quad 2 namakhadi wokudlala lawo asetshenziselwa ihluzo zomoya ne-AR. Ama-UltraStudio amabili HD Amadivayisi wokuthwebula okumbalwa kanye nokudlala futhi asetshenziselwa ukufakwa nokukhipha ukubambezeleka kwezinhlaka zekhamera ukuze kuvumelaniswe nehluzo, futhi kusetshenziswe amanye amabili kukho konke ukunqwabelanisa kwesithombe. Ama-Multiple Micro Converters BiDirectional SDI /I-HDMI asetshenziselwa ukuqapha zonke izimpawu nokulandela amavidiyo, ngenkathi iTeranex Mini SDI Distribution 12G isetshenziselwa ukusabalalisa okuphakelayo kohlelo ukuqapha.
"Lokhu kube ngenye yamaphrojekthi amnandi kakhulu engake ngasebenza kuwo, futhi nakanjani ngeledlule elikhulu," kuphetha uKossowski. “Ngokhetho, udinga ukuhlinzeka ngezibuyekezo ngesikhathi esifanele futhi zinembile njengoba singekho isikhathi sephutha. Bengidinga amagiya engingathemba ukuthi ngazi ukuthi ngeke kungihlulele nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi sokusakazwa, futhi ngangazi ukuthi sizophumelela nge I-Blackmagic Design sisekela ukuhamba kwethu komsebenzi. ”
Izithombe zomkhiqizo ze-Ultimatte, Studio ye-ATEM Television HD, I-DeckLink Quad 2, Micro Converter BiDirectional SDI /I-HDMI, I-UltraStudio HD I-Mini, iTeranex Mini SDI Distribution 12G nakho konke okunye I-Blackmagic Design imikhiqizo iyatholakala ku www.blackmagicdesign.com/media/images.
I-wTVision idala izixazululo zokusakaza ezihlanganisiwe ezisuselwa ekuthuthukisweni kwesoftware, uphawu lomklamo, imisebenzi ebukhoma kanye nokukhishwa kwemithombo yabasebenzi ekhethekile. Le nkampani yaba ngomunye wabahlinzeki bezithombe zesikhathi sangempela nabanikezeli be-automation automation ngenxa yezixazululo zayo eziguqukayo nolwazi olugcwele emikhakheni ehlukene ngaphakathi embonini. Kusuka ekusakazweni kwesikhathi esisodwa ukuya kweminye yemincintiswano ebaluleke kakhulu kwiplanethi, i-wTVision ibamba iqhaza ezinkulungwaneni zokusakazwa minyaka yonke futhi inolwazi kumazwe angaphezu kwe-60. Izisombululo ze-wTVision zemidlalo, ukumboza okhethweni, imibukiso yezokuzijabulisa nezokusakaza izindaba, ngokuhambisana nezinhlelo zakhona zokulawula, ukukhetha okukhethwayo kwama-TV amakhulu nabakhiqizi emhlabeni wonke.
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie Ukungathandwa kwabathelisi esikubona I-Blackmagic Design i-blackmagic design ultimatte Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe I-Cobalt Encoder Ukuhlela I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor Ukhetho lwasePanama ukukhiqizwa kokuthunyelwe SJGolden - Ama-spears nama-Arrows I-Colonie I-Colonie - Izindaba I-COLONIE / Chicago Ubuchwepheshe be-TV I-TVU Izinethiwekhi Umlingisi wevidiyo i-TV	2019-08-13
Ngaphambilini: I-Podcast Movement 2019 Ku-Exhibit
Olandelayo: Imiklomelo emibili yama-Colonie Garners Amabili Ama-Telly Womkhankaso we-Adert ​​Vertical Ad Campaign